Warsida GO ayaa ogaaday in Beesha caalamka ay sheegeen inaysan aqbali doonin Natiijada Doorashada Madaxweynaha haddii aan si wanaagsan loo xalin musuq-maasuqa lagu doortay 24 Kursi oo kamid ah Baarlamaanka cusub.
Illo-wareedyada GO ayaa waxay kaloo sheegayaan in Wakiillada Beesha caalamka ee Somalia u gudbin doonaan Golaha Ammaanka musuq-maasuqa Doorashada Baarlamaanka, haddii aysan hogaamiyaasha Madasha tallaabo ka qaadin.
Beesha caalamka ayaa sidoo kale dalbatay in lawada celiyo dhammaan kuraasta Xildhibaanada kusoo baxay musuq-maasuqa, dibna loo doorto Xildhibaano cusub, meeshana laga saaro kuwa la eedeeyay ee dadkoodu aysan dooran.
Hogaamiyaasha madasha, ayaa iyagu doonaya in la laalo dalabka Guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka dalka.
Khilaafkaas, ayaa wali taagan, waxaana wararku sheegayaan in Hogaamiyaasha Soomaalida maanta soo saari doonaan War-murtiyeed lagu sheegi doono in Doorashada Madaxweyne markii 5-aad dib u dhacday, lana qaban doono 22-ka Bisha January ee 2017.
Gudiga Khilaafaad doorashada ayaa laga dalbaday inuu sharaxaad ka bixiyo, oo uu soo cadeeyo sababta 24-ka kursiga ee beesha caalamka isha ku hayso ay ugu soo koobeen 11 kursi islamarkaana looga reebay 13-kii kale.
Shalay, Beesha caalamka ayaa si wadajir ah usoo saarey war-saxaafadeed ay ugu baaqayaan Hoggaamiyaasha Madasha Qaran in ay qabtaan doorasho ku salaysan Daah furnaan, La-xisaabtan iyo Sharci.
War Saxaafadeedka oo ay ku midaysanyihiin UN-ka, Midowga Africa, Midowga Yurub, IGAD, Ethiopia, Italy, Sweden, UK iyo Mareykanka ayaa lagu sheegay in la sameeyey musuqmaasuq, Cabsi galin, Afduub, iyo in lagu tagri-faley ergada sharciga ah ee beelaha Soomaaliyeed ay soo qorteen.
Jamciyadda caalamka, ayaa sidoo kale tilmaamtay in hogaamiyaasha Somalida ay ku guul dareysteen inay raacaan Hanaankii Doorashada ee lagu heshiiyay, taasina ay qatar gelinayso in la qabto Doorasho Xor iyo xalaal ah.
MUQDISHO, Somalia- Qoraal kasoo baxay xubnaha beesha calaamka oo ay hogaamineyso Qaramada Midoobey ayaa waxaa lagu sheegey in si toos ah isha ugu hayaan shaqada guddiga khilafaadka doorashada taasoo ah iney talaabada ku haboon ka qaadaan cabas ...
​Cawad "Wixii go'aan gaaris ah waxaa iska leh Barlamanka ee Madashu malaha" [Dhagayso]
Puntland 27.12.2016. 20:28
​Doorashada Somalia oo dib u dhacday iyo go'aamo hor dhac ah oo soo baxay
Soomaliya 20.12.2016. 14:28
​Doorashada Somalia oo mar kale dib u dhacday iyo Jadwal cusub oo soo baxay
Soomaliya 09.12.2016. 01:46